Waxyaabaha Sameeya iyo Waxyaabaha Aan La Siiyin ee Lagu Taageerayo Dhibbanayaasha / Kuwa Ka Badbaaday Dembiyada
· Dheh "Waan ka xumahay wixii dhacay."
Carrabka ku adkee dhibbanayaasha / badbaadayaasha in "adiga adigu khaladka ma lihid."
· Diyaar u noqo inaad dhageysato dhibanaha / badbaadaha oo la wadaagaya waaya-aragnimadooda haddii ay doonayaan inay ka hadlaan fal-dambiyeedka iyo waxyeellooyinkiisa, isla markaana ku caddeeyaan khibraddaas naxariis iyo taageero.
· U oggolow dhibbanaha / badbaadaha inuu dareemo in dareenkooda xanaaq, cidhiidhi, jahwareer, cabsi, iwm aysan ahayn wax aan caadi ahayn oo si dhammaystiran loo qiil samayn karo.
· Faham in dhibanayaal / badbaado badan ay ku adkaan doonto dib u dhiska noloshooda dambi ka dib iyo in qaarkoodna aysan waligood si buuxda uga soo kaban doonin khibrada.
· Wax ka baro naftaada waxyaalaha suurtogalka ah ee falcelinta dhibanaha / badbaadaha iyo adeegyada dhibbanaha / badbaadaha ee la heli karo ee bulshada dhexdeeda ah si aad u siiso taageero xasaasi ah muddada-dheer iyo muddada-dhow.
· Inuu xukumo ama ku eedeeyo dhibanaha / badbaaday dambiga laga galay. Qofka / dadka kaliya ee khaladka kuleh dambiga waa qofka / dadka sameeyay. Danbigu WELIGEED khaladka dhibanaha / badbaadaha.
Sharax labaad sida dhibbanaha / badbaadiyuhu uga falceliyey dembiga.
· Dheh "Waan fahamsanahay", maxaa yeelay macquul maahan in si dhab ah loo fahmo midkood dambiga ama saameynta uu ku leeyahay caafimaadka jir ama maskaxeed ee dhibanaha / badbaadaha.
· Isku day inaad isbarbar dhig ku sameyso dhibbanaha / badbaade khibradiisa wixii khibrad ah ee la mid ah, oo ay ku jiraan taada. Dhibbane / badbaade kasta wuxuu leeyahay falcelintiisa gaarka ah ee dambiga iyo waxyeelada, mana jirto hab “sax ah” oo looga jawaabo.
· Isku day in aad go'aanno iyo xulashooyin u sameyso dhibbane / badbaade. Dembigu waa ku xad gudub qofka codkiisa, doorashadiisa, iyo xakameynta noloshiisa. Maaddaama uusan jirin dhibbane / badbaade doorteen in la dhibaateeyo ama uu xakameeyo dembi ama waxyeello loo geysto iyaga, waxaa muhiim ah in dhibbanayaasha / badbaadayaashu ay awoodaan in ay dib ula soo noqdaan xukunka oo ay gaaraan go'aanno u gaar ah oo noloshooda taabanaya.